Fitsapana klinika vaovao ho an'ny homamiadan'ny prostaty mahatohitra castration metastatic
"Ny fanombohana an'io fitsapana mitambatra miaraka amin'i Astellas io dia fotoan-drano ho an'ny ESSA rehefa manadihady ny tombontsoa azo avy amin'ny klinika amin'ny fanakanana ny mpandray androgen amin'ny alàlan'ny lalana tsy miankina roa amin'ny fitsaboana ny marary miaraka amin'ny mCRPC izay tsy mbola nahazo fitsaboana tamin'ny antiandrogen taranaka faharoa. zava-mahadomelina”, hoy ny Dr. David. R. Parkinson, Tale Jeneralin'ny Mpanatanteraka, ESSA Pharma Inc. “Ny fampifangaroana ireo fitsaboana roa ataontsika dia hikendry ny tendrony roa amin'ny receptor androgen. Ao amin'ny modely preclinical, hitanay fa ny fampifangaroana ny EPI-7386 miaraka amin'ny antiandrogens amin'izao fotoana izao dia mety hitarika amin'ny fanakanana lalindalina kokoa sy malalaka kokoa ny biolojia androgen. Ity fitsapana Phase 1/2 ity dia manamarika ny andiany voalohany amin'ny fanadihadiana klinika hanombanana ny EPI-7386 miaraka amin'ny fitsaboana antiandrogen amin'izao fotoana izao amin'ny marary manana mCRPC, miaraka amin'ny fitsapana mitambatra Phase 1/2 izay antenaina hanomboka amin'ny 2022.
Ny fitsapana klinika Phase 1/2 (NCT05075577) dia manomboka amin'ny ampahany voalohany amin'ny dingana 1 izay ahitsy ny fatran'ny zava-mahadomelina tsirairay ary arahin'ny ampahany 2 izay ampitahaina amin'ny fitambaran'ny enzalutamide sy EPI-7386 ny singa tokana enzalutamide. Ny fianarana dingana 1 dia antenaina hisoratra anarana hatramin'ny 30 mCRPC marary izay mbola tsy voatsabo tamin'ny fitsaboana antiandrogen andiany faharoa. Ny tanjon'ny ampahany 1 amin'ny fandalinana dia ny fanombanana ny fiarovana sy ny fandeferana amin'ny fitambaran'ny zava-mahadomelina ary ny fametrahana ny dosie 2 soso-kevitra ho an'ny EPI-7386 sy enzalutamide rehefa ampiarahina. Ny fianarana dingana 2 dia antenaina hampiditra marary 120 mCRPC izay tsy mbola notsaboina tamin'ny fitsaboana antiandrogen andiany faharoa. Ny tanjon'ny fizarana 2 amin'ny fandalinana dia ny fanombanana ny fiarovana, ny fahaleovan-tena ary ny hetsika antitumor an'ny EPI-7386 miaraka amin'ny dosie raikitra amin'ny enzalutamide raha oharina amin'ny enzalutamide amin'ny maha solontena tokana.
Previous Ny tatitra isan-taona momba ny fizahantany any Kenya dia manondro fanantenana vaovao
Manaraka Inona no mafana ankehitriny amin'ny akanjo maso amin'ny taona 2022